Gbasara Anyị | Ruian Honetop Machinery Co., Ltd.
AKWETKWỌ AKWERYKWỌ nwere ahụmahụ 14 kemgbe afọ 2002 na ahịhịa nkwakọ ngwaahịa. Anyị na-enye ihe ngwọta nkwakọ ngwaahịa na-aga nke ọma maka ụdị ngwaahịa ọ bụla n'ime igbe katọn na nkwakọ akpa. Dị ka akpaka cartoning igwe, nri katọn igbe nkwakọ igwe, akwụkwọ anụ katọn igbe nkwakọ igwe, agba katọn igwe, bọlbụ katọn igwe, na-agba ndochi na akara katọn igwe, katọn maka vials, sachet, karama, tube, osisi ... Anyị na- nwere akpa nkwakọ igwe, akwụkwọ ahịhịa Ndinam igwe na na.
Omenala imewe nkwakọ usoro. Nabata kọntaktị na anyị maka nkọwa igwe. The ụlọ ọrụ mechaa ISO900 mba ọkọlọtọ àgwà usoro asambodo, OA asambodo, Mankeumman akwụkwọ. Enweela 95% igwe na mba 50, gụnyere USA, Canada, Chile, Mexico, Spain, Dominica, Venezuela, Russia, Turkey, Morocco, Jamaica, Nicaragua, Colombia, Middle East ...
N'ihi na e nwere elu imewe echiche, magburu onwe ngwaahịa mma na oru oma mgbe-sales ọrụ, e rere na mpaghara nwere ezigbo mmetụta, na-nwetara ndị ahịa otuto.
Ọ dịla "nkwa dị mma, ọrụ ọkachamara, afọ ojuju ndị ahịa"
maka ebumnuche njikwa, iji "obiọma na ikpe ziri ezi buru ụzọ, uru baa uru, ọrụ bụ isi" maka azụmaahịa azụmahịa. Iji mee ka mmụọ ọsụ ụzọ, ọhụụ ọhụrụ, wee mepụta nnukwu ihe nrụpụta, ka ndị ahịa anyị wee rite uru na ọrụ anyị.
Otu, ihe ọhụrụ, nraranye, na iguzosi ike n'ezi ihe 'bụ ihe niile achọrọ maka ụlọ ọrụ yana maka ndị ọrụ ọ bụla. Anyị bụ otu na otu nzukọ nwere ihe mgbaru ọsọ. Dị n'otu na pragmatism bụ isi ihe nzukọ a chọrọ, ebe ọhụụ bụ Ebumnuche otu ahụ na-agba mbọ. Yabụ, na ọrụ bụ isi, anyị kwesịrị iche echiche banyere otu ebe, rụsie ọrụ ike n'otu ebe, tụgharịa n'ime eriri, chọọ eziokwu sitere na eziokwu, ma rụọ ọrụ ahụ ala. Site na mmụta na mmata, "anyị ga-eme ihe niile ga - eme ka mmepe ụlọ ọrụ ahụ dị mma, ihe ọ bụla ga - eme ka ịdị n'otu ụlọ ọrụ ahụ dịrị, yana ihe niile ga - eme ka ụba ego na ibelata mmefu" iji nweta ụlọ ọrụ ahụ ogologo oge. mmepe.